.အဘိဓမ္မာ (၇) ကျမ်းကို နေ့ညမပြတ်ဘဲ (၁၁) ရက်တိတိ ပူဇော်မယ့် သံဃာတော် (၂၄) ပါး အတွက် အလှူငွေ (၁၁) သိန်း လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဆုအိမ့်စံ. – Thukhuma
.အဘိဓမ္မာ (၇) ကျမ်းကို နေ့ညမပြတ်ဘဲ (၁၁) ရက်တိတိ ပူဇော်မယ့် သံဃာတော် (၂၄) ပါး အတွက် အလှူငွေ (၁၁) သိန်း လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဆုအိမ့်စံ.
အနုပညာအလုပ်တွေကိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေပြီး လက်ရှိမှာလည်း ကြော်ငြာတွေနဲ့ Live Sale လေးတွေလုပ်နေတဲ့ ဆုအိမ့်စံ တစ်ယောက် သူမရဲ့အနုပညာကြေးထဲကနေ အဘိဓမ္မာ (၇) ကျမ်း ကို နေ့ညမပြတ်အသံမစဲ မဟာပဌာန်းပွဲအဖြစ် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်မယ့် သံဃာတော် (၂၄) ပါးအတွက် အလှူငွေ (၁၁) သိန်းလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
အလုပ်တွေကောင်းသလို စေတနာလည်းကောင်းတဲ့ ဆုဆုတစ်ယောက် ဒီထက်မက အောင်မြင်နိုင်ဖို့ ပရိသတ်တွေက ဆုတောင်းစကားတွေအများကြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ (၂၀၂၁) နှစ်သစ်အတွက် သူမရဲ့အလှူဒါနလေးဖြစ်ပြီး အားလုံးလည်းသူမနဲ့ထပ်တူ ကုသိုလ်ရစေဖို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီလိုကြည်နူးစရာအလှူပုံရိပ်လေးတွေကို ” နှစ်သစ် အလှူလေးပါ အဘိဓမ္မာ (၇) ကျမ်းလုံးအား နေ့ညမပြတ်အသံမစဲတရားကို (၁၁) ရက်တိတိ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်မည့်သံဃာတော် (၂၄) ပါး အတွက် အလှူငွေ (ဆယ့်တစ်သိန်း တိတိ) လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ် ဆုဆုရဲ့အလှူလေးကို နတ် လူ သာဓုခေါ်စေသော် သာဓုခေါ်ရျ် ကုသိုလ် ထပ်တူထပ်မျှရပါစေ ” ဆိုပြီး ဝေမျှခဲ့ပါတယ်။
Photo – Hsu Eaint San
အႏုပညာအလုပ္ေတြကိုႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနၿပီး လက္ရွိမွာလည္း ေၾကာ္ျငာေတြနဲ႔ Live Sale ေလးေတြလုပ္ေနတဲ့ ဆုအိမ့္စံ တစ္ေယာက္ သူမရဲ႕အႏုပညာေၾကးထဲကေန အဘိဓမၼာ (၇) က်မ္း ကို ေန႔ညမျပတ္အသံမစဲ မဟာပဌာန္းပြဲအျဖစ္ ႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္မယ့္ သံဃာေတာ္ (၂၄) ပါးအတြက္ အလႉေငြ (၁၁) သိန္းလႉဒါန္းခဲ့ပါတယ္။
အလုပ္ေတြေကာင္းသလို ေစတနာလည္းေကာင္းတဲ့ ဆုဆုတစ္ေယာက္ ဒီထက္မက ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔ ပရိသတ္ေတြက ဆုေတာင္းစကားေတြအမ်ားႀကီးေျပာခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၂၁) ႏွစ္သစ္အတြက္ သူမရဲ႕အလႉဒါနေလးျဖစ္ၿပီး အားလုံးလည္းသူမနဲ႔ထပ္တူ ကုသိုလ္ရေစဖို႔ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါေသးတယ္။
ဒီလိုၾကည္ႏူးစရာအလႉပုံရိပ္ေလးေတြကို ” ႏွစ္သစ္ အလႉေလးပါ အဘိဓမၼာ (၇) က်မ္းလုံးအား ေန႔ညမျပတ္အသံမစဲတရားကို (၁၁) ရက္တိတိ ႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္မည့္သံဃာေတာ္ (၂၄) ပါး အတြက္ အလႉေငြ (ဆယ့္တစ္သိန္း တိတိ) လႉဒါန္းခဲ့ပါတယ္ ဆုဆုရဲ႕အလႉေလးကို နတ္ လူ သာဓုေခၚေစေသာ္ သာဓုေခၚရ်္ ကုသိုလ္ ထပ္တူထပ္မွ်ရပါေစ ” ဆိုၿပီး ေဝမွ်ခဲ့ပါတယ္။
.အထက်ဖားအောက်ဖိဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့မှသိရတော့တယ်ဆိုပြီး ခံစားချက်တွေဖွင့်ဟပြောပြလာတဲ့ ခေးဆက်သွင်.
.ချစ်ဇနီး၊ သမီးတွေနဲ့အတူတူနေထိုင်ဖို့ (၅)ဧကရှိတဲ့ ခြံအကျယ်ကြီးကို ဖခင်ဆီကမွေးနေ့လက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့ နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ခင်ပွန်း ကိုဇေသီဟ.
.စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်း အဆင်ပြေနေတဲ့အပြင် ထိုင်းထီ (၂) စောင်လည်း ဆက်တိုက်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ နေဒွေး.